Ciidamada Imaaradka Oo Ka Hulleelay Maamulka Puntland + Maxaa Xigga [WARBIXIN] | Hangool News
Ciidamada Imaaradka Oo Ka Hulleelay Maamulka Puntland + Maxaa Xigga [WARBIXIN]
April 14, 2018 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews(Boosaaso):- Ciidamada Imaaraadka Carabta ee dhanka tababarka ka taageerayay ciidamada badda ee maamulka Puntland ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Boosaaso iyaga oo raacay diyaarad khaas u ah oo Imaaraadka looga soo diray. Arrintan ayaa loo arka in ay tahay Imaaraadka oo joojiyay tababaridda iyo maalgalinta ciidamada badda Puntland.
Idaacadda VOA Somali ayaa ku warrantay in la rumaysan yahay in tagitaanka Saraakiisha reer Imaaraad salka ku hayso khilaafka Muqdisho iyo Abu Dubai. Waxay idaacaddu sheegtay in maamulka Puntland ku kala qaybsamay taageero loo muujiyo Imaaraadka markii xukumadda Muqdisho iyo baarlamaankeedu ka hor yimaaddeen shirkadda DP World.
Warbaahinta ayaa ku warrantay in saraakiisha dhoofayay ee Imaaraadka la isku dayay in shandadahooda la baadho iyaguna ay diideen, taasna ay muddo xurguf iyo xannibaad abuurtay.
Maalmihii u dambeeyay Imaaraadka iyo Somalia ayaa is dhaafsanayay hadallo kulul waxaanay Somalia sheegtay in ay la wareegayaan masuuliyadda ciidamada Imaaraadku Muqdisho ku hayay laakiin, wali ma cadda mustaqbalka ciidamada badda Puntland oo Imaaraadku bixin jiray kharashkiisa iyo tababaridda, islamarkaana ay maamulayeen dekedda Boosaaso.
Somaliland ayaa indhaha ku haysa xidhiidhka sii xumaanaya ee , Somalia iyo Imaaraadka iyada oo uu wanaagsanaanayo xidhiidhka Somaliland, Itoobiya iyo Imaaraadku.
Golaha maalgalinta caalamiga ah ee Imaaraadka ayaa maanta taageeray dacwadda shirkadda DP World ee ka dhanka ah dawladda Jabuuti. Golahan difaaca iyo la talinta u qaabilsan hantida Imaaraadka ee qurbaha ayaa dhalliilay tallaabooyinka Jabuuti ku hor istaagtay maalgalinta DP World waxaanay sheegeen in ay walaac ku abuurayso maalgalinta Imaaraadka ee suuqyada Jabuuti.
Dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa gaadhay Waddanka Sucuudiga halkaas oo uu kaga qayb galayo shirweynaha madaxda Carabta. Waxa jira warar sheegaya in Sucuudigu wado dadaallo lagu dhexdhexaadinayo Muqdisho, Jabuuti iyo Abu Dubai laakiin, lama oga sida ay midho dhal u noqon doonan xilligan xaaladdu adkaatay